Ahoana no ahafahanao mandray soa avy amin'ny fivarotana ravinkazo?
Misy olona maro mitady ny fahafahana hahazo vola amin'ny Internet. Ny serivisy iray tena tadiavinao izay azonao atao dia ny fivarotana fivarotana. Maro ireo mpivarotra an-tserasera no vonona handoa vola be mba handefa rohy. Tsy mila manana tranokala ianao, na mivarotra vokatra na serivisy. Ankoatra izany, tsy voatery hanao asa tena izy ianao. Ny zavatra rehetra ilainao dia manaparitaka fotsiny ny votoatiny ilaina amin'ny URL mety ho an'ny kaonty media sosialy samihafa, bilaogy, forum ary loharano hafa. Na izany aza, dia toa tsara loatra ny ho marina. Ny fivarotana fivarotana dia tsy ny raharaha izay ilainao handray anjara. Mazava ho azy, afaka manangona vola amin'ny fivarotana rindry. Na dia izany aza dia misy antony marobe tsy maninona ny fotoana sy ny ezaka ataonao.
Hodinihintsika ato amin'ity lahatsoratra ity ny fomba azo anangonam-bola amin'ny fivarotana ravinkazo ary ny fomba handosirana ny sazy vokatry ny fiaraha-miasa amin'ireo asa ireo.
Iza no afaka mandoa vola amin'ny fandefasana rohy?
Andeha isika hijery akaiky kokoa izay mety mila serivisy fampidirana rohy, ary nahoana izy ireo no vonona hanome vola ho azy ireo.
Ny habetsahan'ireo orinasan-tseratserasera goavana indrindra dia ny mametraka ny lanjany amin'ny valin'ny fikaroham-bidy ary mahazo fitohizan'ny fivoarana biolojika amin'ny pejy Internet. Better ny lanjany dia midika bebe kokoa mpanjifa, ary avy eo, ny mpanjifa maro dia midika fa ambony ny fahefana, ny fiovam-po, ary ny fidiram-bola. Ny fomba tsara hahazoana tombony ambony amin'ny SERP dia amin'ny fametahana rohy mankany amin'ny tranonkalanao. Ireo rindran-damina ireo dia toy ny vaton'ny olona hafa ary mampiseho ireo fitaovan'ny fikarohana izay azo itokisana, azo itokisana ary manam-pahefana. Amin'ny alalan'ireo famantarana ireo dia manamboatra ny heviny momba ny kalitaon-tranonkalanao ny orinasam-pitadiavana ary manamboatra ny tranokalanao ambony kokoa amin'ny SERP. Taona maro lasa izay, ireo mpivarotra an-tserasera dia nanazava fa azony atao ny mividy "vato" ho an'ny sehatr'izy ireo mba hanatsarana ny toerana misy azy sy hanentanana ny saina.
Vao haingana, teknika mahomby iray ny manamboatra sira fifandraisana, fa ankehitriny dia tsy miasa intsony. Google dia nanova ny algorithm voafantina ary namorona sivana Penguin izay mahita sy manasazy ireo tranonkala mirotsaka an-tsehatra toy ny fividianana backlink. Misy tompona tranonkala vitsivitsy izay mbola liana amin'ny famoahana rohy, fa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia heverina ho toy ny maty. Ny fitaovam-pikarohana mitady vola an-tapitrisany amin'ny fisorohana ny olona amin'ny fanatanterahana fomba fanao mifototra amin'ny fatorana tsy ara-dalàna. Google, ohatra, dia maneho fa ny rohy karamaina dia tsy mamaritra ny fahefan'ny vohikala ary tsy misy fiantraikany amin'ny pejy PageRank. Ankoatra izany, ny sariohatra maoderina finday dia lasa mahira-tsaina ary afaka mamantatra hoe iza amin'ireo tranonkala no mifandray amin'ny fividianana rohy. Midika izany fa hisintona anao i Google ary hanasazy anao amin'ny rohy naloa amin'ny alàlan'ny fametrahana ny toerana misy anao. Amin'ny fividianana jiosy fifandraisana, mety hanimba ny ezaka rehetra ataonao amin'ny fanatsarana ny fikarohana ianao.
Ankehitriny, ireo orinasa manana fomba fijery mahazatra amin'ny fampiroboroboana amin'ny aterineto dia tsy mividy rindran-damina satria fantatr'izy ireo fa mampidi-doza ho an'ny orinasan-tserasera. Na dia izany aza dia ilaina ny milaza fa ny sasany amin'ireo orinasa tsy manam-piheverana dia mbola manandrana mandika ny fitsipika sy ny fialan-tsasatra Google amin'ny fividianana jiosy amin'ny raozy ao amin'ny vohikalany Source .